သတင်း - ဟိုတယ်အင်ဂျင်နီယာအတွက် ပလပ်စတစ်ဘောလုံးအဆို့ရှင်များနှင့် ပလပ်စတစ်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကြား ကွာခြားချက်...
ဟိုတယ်အင်ဂျင်နီယာအတွက် ပလပ်စတစ်ဘောလုံးအဆို့ရှင်နှင့် ပလတ်စတစ်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကြား ကွာခြားချက်...
ပလပ်စတစ်ဘောလုံးအဆို့ရှင်သည် PVC ပလပ်စတစ်ဘောလုံးအဆို့ရှင်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပလပ်စတစ်ဘောလုံးအဆို့ရှင်များနှင့် pvc ဘောလုံးအဆို့ရှင်များသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် corrosive media များကို ကြားဖြတ်ဟန့်တားရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်နှင့် ခိုင်ခံ့သောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Pneumatic ပလပ်စတစ်ဘောလုံးအဆို့ရှင်များနှင့် pvc pneumatic ဘောလုံးအဆို့ရှင်များကို အထွေထွေသန့်စင်သောရေနှင့် သောက်ရေသန့်ပိုက်စနစ်များ၊ ရေနုတ်မြောင်းနှင့် မိလ္လာပိုက်စနစ်များ၊ ဆားရေနှင့် ပင်လယ်ရေပိုက်စနစ်များ၊ အက်ဆစ်အခြေခံနှင့် ဓာတုဗေဒအဖြေစနစ်များ စသည်တို့ကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များစွာတွင် အသုံးပြုကြသည်။ , အရည်အသွေးကိုအသုံးပြုသူအများစုမှအသိအမှတ်ပြုသည်။
(၁) အသွင်အပြင်သည် ကျစ်လစ်လှပသည်။
(၂) ကိုယ်ထည်သည် ပေါ့ပါးပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။
(၃) ပစ္စည်းသည် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိပြီး အဆိပ်အတောက်ကင်းသည်။
(၄) ခိုင်ခံ့သော သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုအကွာအဝေး။
(၅) ဝတ်ဆင်ရန် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ခွဲရလွယ်ကူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူခြင်း။
PVC ပလပ်စတစ်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်တွင် ခိုင်ခံ့သောချေးခံနိုင်ရည်၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်၏ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်နှင့် အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာ၏ အားသာချက်များရှိသည်။ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံသည် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည့် အလယ်လိုင်းအမျိုးအစားကို လက်ခံပါသည်။ ရေ၊ လေ၊ ဆီနှင့် အဆိပ်သင့်သော ဓာတုပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။ အရည်။ Pneumatic plastic butterfly valve သည် compressed air မှတဆင့် switch volume ကို တိုက်ရိုက်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် မီဒီယာစီးဆင်းမှု၊ ဖိအား၊ အပူချိန်နှင့် အခြားကန့်သတ်ချက်များကို ချိန်ညှိနိုင်သည့် 4-20mA အချက်ပြထည့်သွင်းရန် အဆို့ရှင်တည်နေရာပြကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် သန့်စင်သောရေနှင့် သောက်ရေသန့်ပိုက်လိုင်းများတွင် အသုံးပြုသည်။ စနစ်များ၏ အရည်အသွေး၊ ရေနုတ်မြောင်းနှင့် မိလ္လာပိုက်စနစ်များ၊ ဆားငန်ရည်နှင့် ပင်လယ်ရေပိုက်လိုင်းများ၊ အက်ဆစ်အခြေခံနှင့် ဓာတုဗေဒဖြေရှင်းချက်စနစ်များနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများကို သုံးစွဲသူအများစုမှ အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
1. ပစ္စည်းသည် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိပြီး အဆိပ်အတောက်မရှိသော၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသော၊ ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုနည်းသော၊ နှင့် အသေးစားတပ်ဆင်မှုအရွယ်အစား၊
2. ဖြုတ်တပ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အဆင်ပြေသော၊ ဝတ်ဆင်ရန် ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး ရိုးရှင်းပြီး ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသော အစွန်းနှစ်ဖက်တွင် အနားကွပ်များကို ကုပ်ထားခြင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
3. PVC လိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည် 90 ဒီဂရီတွင် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ကာ လျင်မြန်စွာ ကူးပြောင်းသွားပြီး သေးငယ်သော မောင်းနှင်အားတစ်ခုရှိသည်။
4. အဆိုပါ pneumatic ပလပ်စတစ်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာအလိုက်ရွေးချယ်ရန်ပစ္စည်းမျိုးစုံပါရှိသည်, ခိုင်ခံ့သောချေးခံနိုင်ရည်, သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, ပိုက်လိုင်းအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သော, နှင့်ကျယ်ပြန့်အသုံးအဆောင်များအတွက်အသုံးပြုမှု။